Tin Bhokisi Yakarongedzwa neChiumbwa
Nei chikafu chakada kurongedzwa mumakani emataini
Sekugadzira mabhokisi etinplate, ndakaona akawanda mabhokisi ematiniti emarudzi ese. Tinplate mabhokisi akapatsanurwa kuita mhando dzakawanda, zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zveruzhinji rwemazuva ano. Tora chikafu semuenzaniso. Haasi ese marudzi ese echikafu anogona kuendeswa kune vatengi nyowani, iyo yakazvara ...
Iyo yekuvandudza nhoroondo uye zvakanakira tini magaba
Kana tangi yesimbi yekugadzira indasitiri ichangotanga, yaive yakaganhurirwa neyakagadzirwa nzira uye tekinoroji. Nissan kashoma kushandisa yakatemwa renji. Iye zvino yakasangana nekusimudzira kwenguva refu uye tekinoroji kuunganidzwa pamwe nekuburitswa kwezuva nezuva kwemakumi emamirioni. Inogona kusangana nekuwedzera kudiwa f ...
Maitiro ekuderedza kutadza kwesimbi tini bhokisi kurongedza izvo zviri nyore kuita ngura
Kana iwe ukatarisa nokungwarira, iwe pasina mubvunzo uchawana tinplate kurongedza mumba mako. Mabhokisi echipo akadai setini tangi, makeke emwedzi keke, uye tini dzekudya zvese zvinoshandisa tinplate. Tinplate magaba kazhinji anokurumidza kupinda nhanho dzese dzehupenyu hwese. Kwete chete iwo maonerwo akajeka, asi iyo reuse kukosha o ...
Iron bhokisi kurongedza ndeye iwe chete iwe zvausingafunge nezvazvo, haugone kuishandisa pasina
Ndeapi maindasitiri ari tin bhokisi kurongedza anoshandiswa mukati? Kuona uyu mubvunzo, mhinduro yemunhu wese inofanirwa kunge iri indasitiri yekupakata chikafu, tii indasitiri yekurongedza, nezvimwewo zvavakajaira. Chokwadi, mumaindasitiri mazhinji ekuputira, iwe waona yakawanda iron bhokisi kurongedza. Nhasi, mupepeti anoda t ...
Vanhu vanowanzo kuti: "Zvinhu zvinomwe zvekuvhura musuwo, huni, mupunga, mafuta, munyu, muto uye vhiniga tii." Izvi zvinoratidza kuti tii yapinda mumativi ese ehupenyu. Saka maChinese vanhu vanofarira kunwa tii, saka imi mese munoziva nezve kugadziriswa kwemabhokisi etii ekurongedza? 1. Edza kudzivisa kusangana ...
1. Kuiswa kwesimbi kunozivikanwa nevatengi nekuda kwekushanduka kwayo uye kuita kwakawanda. Kuiswa kwesimbi kunoonekwa kwese kwese muhupenyu hwemazuva ano hwezuva nezuva. Kuvandudza kwaro kwakasimba uye zvakasarudzika maficha akanyorwa pazasi zvinoita kuti ive yakanaka kurongedza mhinduro yezana ramakumi maviri nemasere: Bhenefiti yesimbi yakarongedzwa ...
Bhokisi ReTini, Tin Bhokisi Rekutakura, Cd Kuchengetedza Kesi, Yakasarudzika Tin Bhokisi, Mhete Inodhonza Inogona Kuvhura Claw, Simbi Yekuchengetedza Basket Iine Lid,